China Dropout Kucheka Yakakwira Voltage Komputa Fuse Mugadziri uye Mutengesi | Nhoroondo
Kudonhedza fiyuzi inoumbwa neyekusimudzira inotsigira uye fiyuzi chubhu. Kunofambira mberi kutaurirana kwakatarwa pamativi maviri e insulator rutsigiro uye inofamba kusangana kunoiswa pamativi maviri efiyuzi chubhu. Fuse chubhu inoumbwa mukati me arc-yekudzimisa chubhu, yekunze phenolic komputa bepa chubhu kana epoxy girazi chubhu.Kuti ubatanidzwe neinouya inodyisa yekuparadzira mitsara inonyanya kuchengetedza transformer kana mitsara kubva ipfupi redunhu uye kuwandisa, uye on / off kurodha ikozvino.
Porcelain donhwe fiyuzi
Kugamuchirwa kuti utaure nesu kune rumwe ruzivo. Mamwe maratidziro anogona kurongedzwa zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
1.kuchengetedza pamusoro-pari kudzivirirwa.
2.modern uye compact dhizaini.
3.high michina simba.
Sevhisi Mamiriro Ezvinhu
1.Normal sevhisi mamiriro: iyo ambient tembiricha haina kukwirira kupfuura +40 madhigirii, kwete pasi pane -40 madhigirii;
Kukwidza kusapfuura 1000m;
Iyo yekumusoro mhepo kumhanya haifanirwe kupfuura 35m / s;
Kudengenyeka kwenyika hakuna kusimba kudarika madigiri masere.
2.Chigadzirwa hachibatsiri kunzvimbo dzinotevera:
Nzvimbo dziri munjodzi yekutsva kana kuputika;
Nzvimbo yekudengenyeka kwechisimba kana kukanganisa;
Kuitisa magetsi, kemikari gasi chiitiko uye zvakakomba kusvibiswa munyu mhute nzvimbo.
Fuse Cutout ine Porcelain Base inonyanya kushandiswa kuchengetedza mitsara yekuparadzira uye maTransformer kubva pakuwandisa uye kukuvara kwedunhu-pfupi. Iyo inogona zvakare kuve yemusoro disconnection switch pamwe nekushandisa kweinotakurika mutoro-kuputsa chishandiso. Iyo fiyuzi yekucheka inovandudzwa kuti ikwane zvakajairika mamiriro ezvinhu ebasa uye mafomu uye yakapasa iyo mhando bvunzo yeKEMA lab.
(KV) Rated ikozvino
(A) Circuit mudariki
chinzvimbo 3-chikamu (MVA) Kuputsa max
ikozvino (KA) Pamusoro pemagetsi no
(H) RWX10-35 / 0.5 35 0.5 2000 28 Kupfuura 2.5 nguva
(H) RWX10-35 / 3 35 3 2000 28 Kupfuura 2.5 nguva
(H) RWX10-35 / 5 35 5 2000 28 Kupfuura 2.5 nguva
Pashure: Kupisa kutengesa kupisa shrink tambo kubviswa
Zvadaro: Wholesale Chinese Chigadzirwa Chinosanganisira Muchinjikwa Arm Insulator
(1) Unhu Hwevimbiso
Isu tine chaiyo yekudzora mhando maitiro kubva kune yakasvibirira kusvika kune akapedza zvigadzirwa. Yepamberi yekuyedza lab yekuona zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye nekuvandudza kugona kwedu kwekugadzira. Hunhu uye Kuchengeteka mweya wezvigadzirwa zvedu.
(2) Kwakanaka Services
Makore mazhinji ekuziva ruzivo uye akapfuma ekisipoti bhizinesi anotibatsira kutanga timu yakadzidziswa yekutengesa sevatengi vese.
(3) Kukurumidza Kununura
Strong gadzira chinzvimbo kugutsa kukurumidza kutungamira nguva. Iko kutenderera 15-25 mazuva ekushanda mushure mekunge tagamuchira mubhadharo. Inosiyana zvichienderana nezvakasiyana zvigadzirwa uye huwandu.
(4) OEM ODM uye MOQ
Yakasimba R & D timu yekukurumidza zvigadzirwa zvitsva 'kukura, tinogamuchira OEM, ODM uye gadzirisa chikumbiro odha. Kunyangwe kusarudza chazvino chigadzirwa kubva kukatalog yedu kana kutsvaga rubatsiro rweinjiniya kune yako application. Iwe unogona kutiudza nezve zvako zvekutsvaga zvinodiwa.
Kazhinji MOQ yedu ndeye 100pcs pamamodeli. Isu tinogadzirawo OEM neODM sezvaunoda iwe. Tiri kuvandudza mumiriri wepasirese.